Iqhakambise ithuthuko yesifunda inkulumo kandunankulu
eThekwini Municipality / Resource Centre / News / Iqhakambise ithuthuko yesifunda inkulumo kandunankulu
UNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala ukhulume
nezikhulu ezahlukene ezihlonishwayo kubalwa neSilo
uGoodwill Zwelithini kanye neMeya yeTheku iKhansela
uMxolisi Kaunda ngesikhathi ethula inkulumo yakhe ebheke
esifundazweni ngomhlaka-4 Mashi. UNdunankulu uZikalala
ucacise kabanzi ngentuthuko esiyenziwe kulesi sifunda,
kubalwa noMasipala weTheku.
IZINHLELO zesifundazwe zamanje kuya phambili kanjalo nezinguquko ezinhle esezenziwe kuhlanganisa noMasipala weTheku zichazwe kabanzi nguNdunankulu waKwaZulu-Natali uSihle Zikalala emcimbini wokwethulwa kwenkulumo ebhekiswe esifundazweni (State of the Province Address) ngomhlaka-4 Mashi.
UNdunankulu uZikalala ubekhuluma nezikhulu ezahlukene ezihlonishwa kakhulu kubalwa neSilo uGoodwill Zwelithini Kanye neMeya yeTheku iKhansela uMxolisi Kaunda. Ngesikhathi eqala inkulumo yakhe, uNdunankulu uZikalala uthathe ithuba wabonga iSilo “ngobuholi nobuhlakani bakhe” wengeza ngokuthi ulokhe eqhubeke njalo nokuba yisibonelo esihle sobumbano, ukuthula Kanye nentuthuko esifundazweni.
Ingqikithi yalo mcimbi wokuvulwa ngokusemthethweni kwePhalamende lesiFundazwe saKwaZulu-
Natali iqanjwe ngokuthi “Together, creating our common future”. UNdunankulu uthe uhulumeni kazwelonke unohlelo lokubuyisa isithunzi sabo bonke abantu baseNingizimu Afrika kanye nokuthuthukisa izimpilo zabo. Kulolu hlelo lukazwelonke, isifundazwe sesisiqoke ukuzisukumela phezulu izinto eziseqhulwini eziyisishiyagalombili kulesi sifundazwe, okubalwa kuzo;
Ukudala amathuba omsebenzi
Ukukhulisa lonke uhlobo lwamabhizinisi
Ukuthuthukiswa kwezemfundo, ezempilo namakhono
Ukuhlaliswa kwabantu nengqalasizinda Kanye nokuphila ngendlela esimeme
Ukwakha isifundazwe esinokuthula
Ukwakha uhulumeni onakekelayo nongenankohlakalo
Inkulumo kaNdunankulu uZikalala igxile kakhulu kuMasipala weTheku ngesikhathi kuqhubeka
lo mcimbi nokubalwa izincwadi ezithunyelwe ehhovisini lakhe ebezivela kubafundi baseThekwini
ababili. Laba bafundi bebecela ukuba uNdunankulu angenelele kwezinye zezinkinga ababhekene nazo ezikoleni nasemphakathini yabo.
USabelo Manqele ofunda ibanga lesi-11 eVuyiswa Mtolo High School Kwa-Mashu uvezele uNdunankulu usizi lwezikole zasemalokishini njengoba befundela emagumbini angenamafasitela nezicabha wabe esecela neqhinga elingasiza ukunciphisa ukusetshenziswa kwezidakamizwa emalokishini. Khonamanjalo, uShreya Singh, 11, waseNorthlands Primary School ucelele isikole sakhe kuNdunankulu uZikalala ukuba sibe ngesinye sezikole kwezingu-11 esizokhethwa esifundazweni ukuba sifunde ngamarobhothi namakhodi njengengxenye yekharikhulamu.
UNdunankulu uZikalala uthe izikhulu zoMnyango wezeMfundo zizovakashela lezi zikole zombili ukuze kudingidwe ngalezi zicelo. Uthe bebegxile kakhulu kuhulumeni wasekhaya kwazise unomthelela omkhulu kubantu. “Ubuholi bethu obuqinile bubonakale muva nje ngesikhathi senza ushintsho komasipala abaningi esifundazweni, okubalwa nomasipala weTheku noMsunduzi.
Lokhu kube wukungenelela kwezepolitiki okudingekayo, futhi okuzosiza umphakathi.” Uthe izinguquko kuMasipala weTheku seziyabonakala. Uthe uhlelo lwentuthuko seluqalile lokuphucula ingqalasizinda kagesi neyamanzi.